Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.3.1 Big
Ihe kachasị akọwapụta nke nnukwu data data bụ na ha bụ nnukwu. Dị ka ihe atụ, ọtụtụ akwụkwọ, site na mkparịta ụka-na mgbe ụfọdụ na-etu ọnụ-banyere ole data ha nyochara. Dịka ọmụmaatụ, otu akwụkwọ e bipụtara na Sayensị na- amụ ihe na-eji okwu eme ihe na akwụkwọ Google Books gụnyere ihe ndị a (Michel et al. 2011) :
"[Cor] anyị nwere ihe karịrị narị ijeri 500, n'asụsụ Bekee (ijeri mmadụ 361), French (ijeri 45), Spanish (ijeri 45), German (ijeri 37), Chinese (ijeri 13), Russian (ijeri 35), na Hibru (Ijeri 2). E bipụtara ọrụ ndị kasị ochie na 1500s. Ọ bụ nanị akwụkwọ ole na ole ka a na-anọchite anya afọ ndị mbụ, gụnyere ọtụtụ puku okwu. Ka ọ na-erule afọ 1800, corpus na-arị elu ruo nde 98 okwu kwa afọ; site n'afọ 1900, pasent 1.8; na 2000, ijeri 11. Mmadụ enweghị ike ịgụ ya. Ọ bụrụ na ị gbalịrị ịgụ naanị ntụgharị asụsụ Bekee n'afọ 2000 nanị, na ntụgharị okwu ziri ezi nke 200 okwu / min, na-enweghị nsogbu maka nri ma ọ bụ ụra, ọ ga-ewe afọ 80. Usoro nke akwụkwọ ozi dị 1000 ugboro ogologo karịa genome: Ọ bụrụ na ị dee ya n'ahịrị kwesịrị ekwesị, ọ ga-eru Ọnwa ma laghachi ugboro 10 karịa. "
O doro anya na ọnụ ọgụgụ nke data a na-adọrọ mmasị, anyị nile nwekwara ọganihu na ndị ọrụ Google Books wepụtara ndị a ọha na eze (n'eziokwu, ụfọdụ n'ime ọrụ ndị dị na njedebe nke isi a na-eji data a eme ihe). Ma, mgbe ọ bụla ị hụrụ ihe yiri nke a ị kwesịrị ịjụ: ọ bụ na ihe niile data na-eme ihe ọ bụla? Hà gaara enwe ike ime nchọpụta ahụ ma ọ bụrụ na data nwere ike iru Ọnwa ma laghachi naanị otu ugboro? Kedu ihe ma ọ bụrụ na data nwere ike iru n'elu ugwu Everest ma ọ bụ n'elu Ụlọ Elu Eiffel?
Na nke a, nyocha ha, n'eziokwu, nwere ụfọdụ nchọta nke choro nnukwu okwu okwu ogologo oge. Dịka ọmụmaatụ, otu ihe ha na-enyocha bụ mmalite nke ụtọ asụsụ, karịsịa mgbanwe na ọnụego nke nchịkọta okwu ngwa ngwa. Ebe ọ bụ na ngwa ngwa ụfọdụ anaghị adịkarị, ọtụtụ data dị mkpa iji chọpụta mgbanwe n'oge. Otú ọ dị, ọtụtụ mgbe, ndị na-eme nchọpụta yiri ka ha na-emeso ọnụ ọgụgụ nnukwu data dị ka njedebe- "lelee ọtụtụ data m nwere ike ịdọrọ" -ọzọ karịa otu ụzọ dị mkpa maka sayensị dị mkpa.
Na ahụmahụ m, nchọpụta nke ihe ndị na-adịghị emekarị bụ otu n'ime atọ ndị ọkà mmụta sayensị atọ kwubiri na ihe ndekọ kachasị mkpa na-enyere aka. Ihe nke abuo bu omumu ihe omuma, dika ihe nkuzi nke Raj Chetty na ndi oru ibe ya (2014) gosiputara ya na (2014) . Na mgbe gara aga, ọtụtụ ndị nchọpụta amụwo ihe eji eme njem site na iji ndụ ndị nne na nna na ụmụaka tụnyere ndụ. Achọpụta na-agbanwe agbanwe site n'akwụkwọ a bụ na ndị nne na nna bara uru ga-enwe ụmụ nwere mmụba, ma ike nke mmekọrịta a dịgasị iche iche n'oge na mba niile (Hout and DiPrete 2006) . Ma n'oge na-adịbeghị anya, Chetty na ndị ọrụ ibe ha nwere ike iji akwụkwọ ndekọ ụtụ si nde mmadụ iri anọ na-atụle ihe dị iche iche na-agagharị na mpaghara mpaghara United States (nọmba 2.1). Dịka ọmụmaatụ, ha chọpụtara na ihe gbasara nwetakịrị nke nwatakịrị na-ebute nchịkọta ego nke nchịkọta ego nke sitere na ezinụlọ dị na ala quintile dị ihe dị ka pasent 13 na San José, California, ma ọ bụ nanị ihe dị ka pasent 4 na Charlotte, North Carolina. Ọ bụrụ na i lee anya na nkeji 2.1 ruo oge ụfọdụ, ịnwere ike ịmalite ịjụ ihe mere njem dị iche iche ji dị elu karịa ebe ndị ọzọ. Chetty na ndị ọrụ ibe ya nwere otu ajụjụ ahụ, ha chọpụtakwara na ebe ndị ahụ na-aga ebe dị elu na-anọchighị anya nke ụlọ, obere ego na-enweghị ego, ụlọ akwụkwọ praịmarị kachasị elu, nnukwu ụlọ ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na ntụkwasị obi ezinụlọ. N'ezie, naanị mmekọrịta a adịghị egosi na ihe ndị a na-eme ka ọ dị elu, ma ha na-atụ aro usoro ndị a pụrụ iji chọpụta ọrụ ọzọ, nke bụ kpọmkwem ihe Chetty na ndị ọrụ ibe ha mere na ọrụ ndị ọzọ. Rịba ama otú ogo data ahụ dịruru ezigbo mkpa na nke a. Ọ bụrụ na Chetty na ndị ọrụ ibe ha ji akwụkwọ ndekọ ụtụ mmadụ 40,000 karịa nde 40, ha agaraghị enwe ike ịkọwa usoro aha gburugburu ebe ọ bụ na ha agaraghị enwe ike ime nchọpụta ndị ọzọ iji gbalịa ịchọpụta usoro ndị mepụtara mgbanwe a.
Onyonyo 2.1: Ebumnuche maka ohere ụmụaka nwere iru 20% nke nkesa ego nyere ndị nne na nna na ala 20% (Chetty et al. 2014) . Ntụle mpaghara, nke na-egosi nchịkọta dị iche iche, na-edugakarị na ajụjụ ndị dị ụtọ ma dị mkpa nke na-esiteghị na nyocha nke otu mba. Ebumnuche ndị a dị n'ógbè a mere ka o kwe omume n'akụkụ ụfọdụ n'ihi na ndị na-eme nnyocha na-eji nnukwu ihe ọmụma data: akwụkwọ ndekọ ego nke nde mmadụ 40. Ejipụtara data dị na http://www.equality-of-opportunity.org/.
N'ikpeazụ, na mgbakwunye na ịmụ ihe ndị na-adịghị eme ma na-amụ ihe dị iche iche, ihe ndekọ dị ukwuu na-enyekwa ndị nchọpụta aka ịchọpụta obere esemokwu. N'ezie, ọtụtụ n'ime ihe ndị a na-elekwasị anya na nnukwu data na ụlọ ọrụ bụ banyere obere esemokwu ndị a: a pụrụ ịchọpụta ọdịiche dị n'etiti 1% na pasent 1.1% site na ọnụego na mgbasa ozi nwere ike ịtụgharị n'ime nde dollar iji nweta ego ọzọ. Otú ọ dị, na ụfọdụ ntọala sayensị, obere esemokwu ndị dị otú ahụ nwere ike ọ gaghị adị mkpa, ọ bụrụgodị na ha dị ịrịba ama (Prentice and Miller 1992) . Ma, na ụfọdụ ntọala iwu, ha nwere ike ịghọ ihe dị mkpa mgbe e lere ya anya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na e nwere ọnụọgụ ahụike ọha mmadụ abụọ ma otu dịtụ irè karịa nke ọzọ, mgbe ahụ ịchọta ịme ihe dị irè nwere ike ịkwụsị ịzọpụta ọtụtụ puku ndụ ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na njirimara bụkarị ezigbo akụ mgbe ejiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi, achọpụtara m na ọ nwere ike iduga mgbe ụfọdụ na-eduhie njehie. Maka ihe kpatara ya, o yiri ka ọ na-edu ndị nchọpụta ka ha ghara ileghara otú e si eme data ha. Ọ bụ ezie na njedebe na-ebelata mkpa ichegbu onwe gị banyere njehie na-enweghị isi, ọ na- eme ka ọ dịkwuo mkpa ichegbu onwe gị banyere njehie nke usoro, ụdị njehie m ga-akọwa n'okpuru ebe a na-ebute site na mkparị na esi esi kee data. Dịka ọmụmaatụ, n'ime ọrụ m ga-akọwa n'ọdịnihu n'isiakwụkwọ a, ndị nchọpụta jiri ozi ndị e mere na September 11, 2001 iji mepụta usoro nchekasị mmetụta uche dị elu nke mmeghachi omume na mbuso agha (Back, Küfner, and Egloff 2010) . Ebe ọ bụ na ndị nchọpụta nwere ọtụtụ ozi, ọ dịghị mkpa na ha ga-echegbu onwe ha ma a ga-akọwa mgbanwe dị iche iche ma ọ bụ ụkpụrụ ha hụrụ-iwewanye iwe n'ụbọchị ọ bụla. Enwere otutu ihe omuma na usoro di nkpa nke oma na nyocha onu ogugu onu ogugu na-eche na nke a bu ezi ihe. Ma, nyocha ndị a n'akụkọ ihe omimi adịghị ama otú e si kee data ahụ. N'ezie, ọ pụtara na ọtụtụ n'ime usoro ndị a bụ ihe a pụrụ ịpụta na otu bot nke mere ọtụtụ ozi na-abaghị uru kwa ụbọchị. Iwepụ otu bot a kpochapụrụ ụfọdụ n'ime isi ihe ndị dị na akwụkwọ (Pury 2011; Back, Küfner, and Egloff 2011) . N'ụzọ dị mfe, ndị na-eme nchọpụta bụ ndị na-echeghị banyere njehie nhazi na-eche ihe ize ndụ nke iji akụrụngwa ha dị oke mkpa iji nweta nkọwa zuru oke dị oke mkpa, dịka obi ụtọ nke ozi na-abaghị uru nke bot na-akpaghị aka.
Na njedebe, nnukwu ihe ndekọ abụghị njedebe n'ime onwe ha, ma ha nwere ike ịme ụfọdụ ụdị nnyocha gụnyere nchọpụta ihe ndị na-adịghị emekarị, ihe e mere na-atụgharị n'echiche, na nchọpụta nke obere esemokwu. Odi ka ihe ndi ozo choputara ka ndi ozo choro ka esi kpoo ha, nke nwere ike iduga ha ka ha nweta uzo di oke mkpa.